Askar Yahuud ah oo ku waxyeeloobay howlgal ka dhacay Al-Qudus. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Askar Yahuud ah oo ku waxyeeloobay howlgal ka dhacay Al-Qudus.
On Jul 8, 2019 419 0
Gelinkii dambe ee maalintii shalay, waxaa magaalada Al-Qudus ee uu ku yaalo masjidka barakada leh ee Al-Aqsaa, ka dhacay howlgal gaari jiirsiin ah oo lagu beegsaday askar katirsan maamulka dhul boobka ah ee Yahuudda.
Qof kaxeynayay gaari nooca raaxada ah ayaa jiiray dhowr askari oo katirsan kuwa Police-ka Yahuudda, xilli ay ku sugnaayeen bar kontorool oo lagu magacaabo Xazma oo dhacda wuqooyiga magaalada Al-Qudus.
Ugu yaraaan 4 askari oo kamid ah askarta Yahuudda ayaa goobta ku dhaawacmey, kuwaas oo xaaladooda caafimaad ay liidato, waxaana la dhigay isbitaal milliteri oo u dhow halka uu howlgalka ka dhacay.
Wargeyska afka dheer ee Ha’hartis, kuna hadla afka Yahuudda ayaa sheegay in labo kamid ah askarta dhaawacmey ay xaaladooda caafimaad liidato, hadana ay qaadanayaan dawooyin caafimaad oo lagula tacaalayo xaaladooda.
Ciidamada Police-ka Yahuudda oo war soo saaray ayaa sheegay in howlgalkan lagu fuliyay gaari nooca raaxada ah oo ay leeyihiin dadka Filastiiniyiinta, taas oo markiiba ka baxsatay goobta, markii uu howlgalku dhacay.
Dhalinyarada muslimiinta ee Filastiiniyiinta ayaa had iyo goor fuliya weeraro kaligii duulnimo ah oo ay u adeegsadaan wax weliba oo ay heli karaan, sida gawaarida, mindiyaha iyo waxyaabha lamidka ah, waxaana Yahuudda u suurta geli la’ iney ka hortagaan weeraradaas kahor inta aysan dhicin.
Weerarkan gaari jiirsiinta ah ayaa kusoo aaday, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada Yahuudda ay wadeen howlgallo raaf ah oo ay ku qab qabnayaan dadka Filastiiniyiinta ee kunool deegaannada kala duwan ee dhulkaas barakeysan.